साताको शुरुमा पनि नेप्से ओरालो, किन घट्दैछ लगातार नेप्से ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > शेयर बजार > साताको शुरुमा पनि नेप्से ओरालो, किन घट्दैछ लगातार नेप्से ?
साताको शुरुमा पनि नेप्से ओरालो, किन घट्दैछ लगातार नेप्से ?
काठमाडौँ। निरन्तर ओरालो लागिरहेको शेयर बजार यो साता पनी उकासिने छाँट देखिएन । साताको पहिलो दिन आइतबार पनी नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ। गत साता घटेर बन्द भएको शेयर बजार साताको सुरुवातमा पनि लगानीकर्तालार्इ उत्साहित बनाउन सकेन्।
आइतबार १६७ कम्पनीका १४ लाख ५७ हजार कित्ता शेयर ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आठ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। कारोवारमा आएका उपसूचकमा फाइनान्स बाहेक सबै घटेका छन्। फाइनान्स ०.०५ प्रतिशतले बढेको छ।
कारोवारको सुरुवातमा १० अंक बढेको बजार अन्तमा घटेर बन्द भएको हो। १४७० अंक बाट सुरु भएको बजार पौने एक बजे सम्म १४८० अंक सम्म उक्लिएको थियो। त्यसपछी लगातार घटेको बजार अन्तमा चार अंक खुम्चिदै बन्द भएको हो। आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को कारोबार मापक सूचक ४.४७ अंकले घटेर १४६७.६८ अंकमा झरेको छ।
बैंक ०.१७, ट्रेडिङ १.३६, होटल ०.३७, विकास बैंक ०.८, जलबिद्युत ०.२, बीमा ०.३३, उत्पादनमूलक ०.५२, अन्य ०.९५ र लघुवित्त ०.१९ प्रतिशतले घटेका छन्। क बर्गका कम्पनीहरुको कारोवारमापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.९३ अंक घटेर ३०९.०१ अंकमा ओर्लिएको छ।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका शेयरधनीले सबैभन्दा बढी करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् भने सिन्धु विकास बैंकका शेयर धनीले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन्।
२०७४ पौष ९ गते १५:५३ मा प्रकाशित
सेयरमूल्य समायोजनमा कस्को मुल्य कति ? हेर्नुहोस् ..
पाँचथरको भालुचोकमा ग्लोबल आइएमईको ५७ औ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा
बैशाख २९ भित्र सेयरधनी बन्नुस् र बैंकको सय रुपैयाँ अंकित १ अर्ब ६३ करोडको सेयरमा आवेदन दिनुस् !
सेयर बजारको राजनीति : त्यो विगत, यो वर्तमान, सूचक घट्ने क्रम जारी !
अधिकृत पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक, को–को उत्तीर्ण ? (नामावलीसहित)
डा. भक्तमानलाई भ्रष्टाचार मुद्दा